Heesta Shiribka ii tuma iyo Saameynta ay ku yeelatay Quluubta Shacabka Soomaaliyeed (Daawo Muuqaal+Warbixin) « AYAAMO TV
Heesta Shiribka ii tuma iyo Saameynta ay ku yeelatay Quluubta Shacabka Soomaaliyeed (Daawo Muuqaal+Warbixin)
685 Views Date April 4th, 2014 time 4:53 pm
Heesta Caan baxday ee hal ku dhigeedu yahay Shiribka Ii Tuma waa hees cajiiba oo aad u soo jiidatay Xiligaan Quluubta Umada Soomaaliyeed waana hees shirib ah ah oo Runtii hadal heynteedu aad u badatay Mudooyinkaan.
Heestan Shiribka ii tuma ayaa waxaa qaaday Boqorka shiribka Xuseen Nuuriyow oo codkiisa aad loola dhacay kuna fiican heesaha Shiribka ah iyo qaab ciyaareedkiisa oo ayadana si aad ah loola dhacay
Abwaanka da,da yar Xuseen Cabdulle Xasan’ Xuseen Madoobe ayey heestani maskaxdisia ka soo maaxatay waxaana ay heetani noqotay mid si weyn logu shirbo dadka dhageysanaya Marka ay Maqlaan.
Heestaa Shiribka Ii Tuma oo Hadal heynteedu kasbatay Meeelaha la isagu yimaado laguna faaqido dhinaca Arimaha Fanka ayaa qaar ka tirsan dadka xiiseeya Shiribka waxa ay noo Sheegeen inay Heetani marka ay maqlaan ay ku raaxeyteen iyagoo qiray in Abwaanka sameeyay Heestaan Xuseen madoobe uu Runtii sameeyay shirib wanaagsan oo dhageysi Leh.
Abwaanka Xuseen Madoobe ma aha shiribkii ugu Horeeyay ee uu sameeyo heesta shiribka ii Tuma balse horay shiribyo loga daba dhacy ayuu abwaanku sameeyay kuwa cusubna waa soo wadaa isagoo sanadkii tagay ee 2012-2013 Noqday Abwaan dhaqameedka heesah Shiribka ee Sanadkaasi.
Waxaan u rajeyneynaa Xuseen Madoobe oo Heestiisa Shiribka i Tuma ay noqotay mid siw eyn loga daba dhacay in xiliyada soo socda uu sameeyo sidii loga bartay Heeso shiribyo ah oo xiiso badan
Waxaa diyaariyay:Axmed Maxamed Cabdulle’Uurdoox’